प्रेम सियोल - Zhuji Feihu वस्त्र मशीनरी कं, लिमिटेड
सियोल आधुनिक शहर स्वादिष्ट मासु विकल्प को पूर्ण साथै ठूलो आकर्षण छ, ऐतिहासिक स्थलहरुको, र स्थानहरू दोकान गर्न.
सर्वश्रेष्ठ समय भ्रमण गर्न
सियोल भ्रमण गर्न उत्तम समय गर्मी र प्रारम्भिक गिरावट बीच न्यानो मौसम समयमा छ. अप्रिल वा सेप्टेम्बर पर्यटन अवस्था लागि सबै भन्दा राम्रो महिना हो. जाडो राम्रो छ तपाईं आउटडोर साहसिक र skying जस्तै यदि.
सियोल मा, तपाईं यातायात रेल तीन मुख्य प्रकारका छन्, बस, मेट्रो, र ट्याक्सी. सियोल वरिपरि प्राप्त गर्न तेज विकल्प विमानस्थलमा रेलमार्ग एक्सप्रेस रेल छ. यो दुई विकल्प एक्सप्रेस छ र सबै बन्द. को एक्सप्रेस विकल्प सबै बिसौनीमा रोक्न रूपमा तेज छ 12 सियोल स्टेशन मा आइपुगेपछि अघि स्टेशन. जबकि सबै स्टप विकल्प सस्ता छ, त्यसको बारेमा 15 को एक्सप्रेस विकल्प भन्दा ढिलो मिनेट.
सियोल संग सबै भन्दा ठूलो मेट्रो संसारमा स्टेशन को एक छ 14 रेखा. यो एक बिट intimidating लाग्न सक्छ, तर तपाईं यसलाई प्रयोग एकपटक, यो धेरै सजिलो छ.
सियोल वरिपरि प्राप्त गर्न अर्को विकल्प एक कार भाडामा छ. यो कम से कम प्रयोग विकल्पहरू मध्ये एक छ सियोल ठूलो यातायात प्रणाली छ रूपमा.
त्यहाँ सियोल मा रहन ठाउँहरू धेरै छन्. तपाईं हाम्रो शीर्ष सिफारिसहरू पाउनुहुन्छ तल:
Myeongdong – पर्यटक गरेको लोकप्रिय विकल्प छ. यो ठूलो सपिङ्ग मल छ, ठूलो खाद्य, र जीवंत नाइटलाइफ. तपाईं Aloft सियोल Myeongdong मा रहन सक्छ.
गंगनम गीत गंगनम स्टाइल गर्न प्रसिद्ध धन्यवाद भए जिल्ला हो. गंगनम मा सबै भन्दा राम्रो क्षेत्रको एक Garosugil छ. यहाँ तपाईँले कालिगढ क्याफे पाउनुहुनेछ, आर्ट ग्यालरी, खुद्रा पसलहरु. यस क्षेत्रमा ठूलो होटल विकल्प भएको Dormy Inn प्रिमियम सियोल Garosugil छ.
Insadong – को कुलीन भव्य परिवारको घर थियो. यहाँ तपाईं परम्परागत घरहरू पाउनुहुनेछ, कोरियाली आर्ट ग्यालरी, फैशन बुटीक, राजसी महलों, र teahouses. रहन राम्रो स्थान CenterMark होटल छ.
ठाउँहरू भ्रमण गर्न
Everland – कोरिया मा सबै भन्दा ठूलो विषय पार्क
Lotte विश्व – कहिल्यै समाप्त नहुने thrill सवारी संग बच्चाहरु को लागि एक ठूलो विषय पार्क.
teamLab विश्व सियोल – कला को एक विदेशी संग्रहालय छ, नृत्य, र प्रविधि.
एन सियोल टावर – तपाईं शहर को मनोरम दृश्य लाग्न सक्छ जहाँ एक प्रतिष्ठित गगनचुम्बी भवन छ.
TrickEye 3D संग्रहालय – यदि तपाईं फोटो प्रेम. यो संग्रहालय मा, तपाईं निराला फोटो पाउनुहुनेछ.
Gyeongbokgung महल – सबैभन्दा पुरानो र grandest पुरातन महलों एक.
Hangang नदी डुङ्गा क्रूज – शहर को परिदृश्य रमाइलो गर्न एक अद्भुत तरिका.
Dongdaemun बजार – यहाँ तपाईं मिल 26 सपिङ्ग मल वरिपरि आवास 50,000 विभिन्न निर्माताहरु र 30,000 विशेषता पसलहरूमा जहाँ तपाईं trendiest कपडे खरिद गर्न सक्नुहुन्छ.
Namdaemun बजार – यो कोरिया मा पुरानो बजार छ. यो संग 400 Mecca घरहरू, 10,200 स्टोर. तपाईंलाई आवश्यक सबै पाउनुहुन्छ, बरतन गर्न लुगा र इलेक्ट्रनिक्स देखि.
Insadong – जहाँ तपाईं कलाकृति जस्तै परम्परागत स्मृति चिन्ह पाउन सक्नुहुन्छ छ, चिया, सेरामिक्स, र कागज सामान.
खानेकुरा र पेय
प्रामाणिक Bibimbap लागि, तपाईं Myeong-दांग जिल्ला मा Gogung प्रयास गर्नुपर्छ. तपाईं कोरियाली BBQ भोजन प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै भन्दा राम्रो विकल्प भएको वांग द्विपक्षीय Jib र गंगनम गरेको Sutbul MAPO Galbi छ. तपाईं चिकन skewers र पोर्क पेट सक्छ जहाँ सडक उपलब्ध stalls छ.
तपाईं सियोल पाउन छौँ सर्वश्रेष्ठ पेय बीच तपाईं ऐंसेलु स्वाद संग एक रक्सी-liqueur छ जो Bokbunjaju छ, एक कोरियन वोदका र अधिक soju 40 वोदका को प्रजातिहरू र 200 मदिरा.
अर्को : मियामी आनन्द